Ny voalohany no tokony ho farany - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-02 > Ny voalohany dia ny farany
Rehefa mamaky Baiboly isika, dia miezaka mafy mahazo izay rehetra nolazain’i Jesosy. Misy fanambarana miverimberina ao amin’ny Filazantsaran’i Matio manao hoe: “Fa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany” (Matio 1.9,30).
Toa nanandrana nanelingelina ny filan'ny fiaraha-monina i Jesosy, hamongotra ny toerana misy azy ary hanao fanambarana mampiady hevitra. Tena nahalala ny Baiboly ny taonjato voalohany tany Palestina. Niverina tamin'ny fotoana nifankahitan'izy ireo tamin'i Jesosy ny mpianatra te-ho mpianatra ary very hevitra sy tezitra. Na aiza na aiza ny tenin'i Jesosy dia tsy nifanaraka tamin'izy ireo. Ny raby tamin'io fotoana io dia voahaja tsara tokoa ny harenany, izay heverina ho fitahian'Andriamanitra. Anisan'ireo "voalohany" teo amin'ny tohatra ara-tsosialy sy ara-pivavahana.
Hoy i Jesosy tamin’ny mpihaino azy, indray mandeha: “Any ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify, raha mahita an’i Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra ianareo, fa raha vao mahita ny tenanareo kosa ianareo! Ary ho avy any atsinanana sy andrefana sy avaratra sy atsimo ireo ka hipetraka hisakafo ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Ary indro, izy no farany, izy no ho voalohany; ary ireo no voalohany izay ho farany » (Lioka 13, 28-30 SLT).
Notarihin’ny Fanahy Masina i Maria, renin’i Jesosy, dia nilaza tamin’i Elizabeta havany hoe: «Tamin’ny sandry mahery no nanehoany ny heriny; naeliny ho amin'ny rivotra izay mirehareha sy miavonavona. Efa nanongana ny mahery tamin’ny seza fiandrianany Izy ary nanandratra ny ambany.” (Lioka 1,51-52 Fandikan-teny Genève Vaovao). Angamba misy famantarana eto fa ny avonavona dia ao anatin'ny lisitry ny fahotana ary Andriamanitra dia fahavetavetana (Ohabolana). 6,16- iray).
Tamin’ny taonjato voalohany tamin’ny Eglizy, ny apostoly Paoly dia nanamafy izany lamina nivadika izany. Amin’ny lafiny ara-tsosialy, ara-politika ary ara-pivavahana, i Paoly dia iray amin’ireo “voalohany”. Olom-pirenena romanina izy ary nanana tombontsoa ho ray aman-dreny nahery vaika. "Ilay voafora tamin'ny andro fahavalo, avy tamin'ny Zanak'Isiraely, avy amin'ny firenen'i Benjamina, Hebreo avy amin'ny Hebreo, Fariseo araka ny lalàna" (Filipiana). 3,5).
Nantsoina ho amin’ny fanompoana an’i Kristy i Paoly tamin’ny fotoana naha-mpitory teny efa za-draharaha ireo apostoly hafa. Nanoratra ho an’ny Korintianina izy ary nanonona ny tenin’i Isaia mpaminany hoe: “Ta-handrava ny fahendren’ny hendry Aho, ary holaviko ny fahalalan’ny saina ... mahamenatra ny hendry ; ary izay malemy amin'izao tontolo izao dia nofidin'Andriamanitra hampahamenatra izay mahery (1. Korintiana 1,19 ary 27).
Nilaza tamin'ny olona mitovy ihany i Paoly fa niseho tamin'i Kristy "natsangana tamin'ny maty" tamin'ny farany ho toy ny fahaterahana mbola tsy teraka ”taorian'ny nisehoany tamin'i Petera, rahalahy 500 tao amin'ny fotoana iray hafa, avy eo tamin'i Jakoba sy ny apostoly rehetra. Famantarana hafa? Hanary ny hendry sy matanjaka ve ny malemy sy ny adala?
Matetika Andriamanitra dia niditra an-tsehatra mivantana tamin'ny tantaran'ny Isiraely ary nanilika ilay lamina andrasana. Esao no lahimatoa, fa i Jakoba no mandova ny fizokiana. Isimaela dia lahimatoan'i Abrahama, fa ny zon'ny lahimatoan'i Isaka dia nomena. Rehefa nitso-drano ny zanak’i Josefa roa i Jakoba, dia nametrahany ny tanany tamin’i Efraima zandriny fa tsy i Manase. I Saoly mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely dia tsy nankatò an'Andriamanitra rehefa nitondra ny vahoaka izy. Andriamanitra dia nifidy an'i Davida, iray amin'ny zanak'i Jese. Mikarakara ny ondry any ivelany any i David dia voatery nantsoina handray anjara amin'ny fanosorana azy. Amin'ny faratampony dia tsy natao ho kandida mendrika ho an'io toerana io izy. Eto koa, dia ny "lehilahy araka ny fanjakan'Andriamanitra" no nofidina teo anoloan'ireo rahalahy hafa manan-danja kokoa.
Nanana zavatra betsaka holazaina momba ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo i Jesosy. Saika miantefa amin’izy ireo avokoa ny toko faha-23 amin’ny Filazantsaran’i Matio. Tian’izy ireo ny toerana tsara indrindra tao amin’ny synagoga, ary faly izy ireo notsenaina teny an-tsena, ka nataon’ireo lehilahy hoe Raby. Nanao ny zava-drehetra izy ireo mba hankasitrahana ny vahoaka. Tokony hisy fiovana lehibe hitranga tsy ho ela. “Jerosalema, Jerosalema… Impiry Aho no naniry hanangona ny zanakao tahaka ny fanangon’ny reniakoho ny zanany ao ambanin’ny elany; ary tsy tianao izany! Ho lao ny tranonareo » (Matio 23,37- iray).
Inona no dikan'izany: "Nandresy ny mahery Izy ary nampitraka ny ambany?" Na inona na inona fitahiana sy fanomezana azontsika avy amin'Andriamanitra, tsy misy antony tokony hireharehantsika! Ny avonavona dia nanamarika ny fiandohan'ny fianjeran'i Satana ary mahafaty antsika olombelona. Raha vao mikikitra amintsika izy dia manova ny fomba fijerintsika sy ny fihetsintsika.
Ireo Fariseo nihaino azy dia niampanga an’i Jesosy ho namoaka demonia tamin’ny anaran’i Belzeboba, andriana demonia. Nanao fanambarana mahaliana toy izao i Jesosy: “Ary na iza na iza no miteny hanohitra ny Zanak’olona, ​​dia hahazo famelan-keloka; fa na iza na iza no miteny manohitra ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka, na amin’izao tontolo izao, na amin’ny ho avy” (Matio 1.2,32).
Toa ny fitsarana farany ho an'ny Fariseo izany. Efa nahita fahagagana maro izy ireo. Niala an'i Jesosy izy ireo, na dia marina sy nahatoky aza izy. Amin'ny maha-karazan'entana farany azy azy ireo dia nangataka azy ireo ny famantarana izy. Moa ve ny fahotana manohitra ny Fanahy Masina? Mbola azo atao ve ny mamela heloka? Na dia eo aza ny avonavony sy ny hamafin'ny fony, dia tia an'i Jesosy izy ary maniry ny hiverenany.
Toy ny mahazatra dia nisy ny maningana. Nanatona an’i Jesosy i Nikodemosy tamin’ny alina, te-hahafantatra bebe kokoa, nefa natahotra ny Synedriona, dia ny Synedriona (Jao. 3,1). Niaraka tamin’i Josefa avy any Arimitia izy tatỳ aoriana, rehefa nametraka ny fatin’i Jesosy tao amin’ny fasana. Nampitandrina ny Fariseo i Gamaliela mba tsy hanohitra ny fitorian’ny apostoly (Asa 5,34).
Voavola amin'ny fanjakana?
Ao amin'ny Apokalypsy 20,11 isika dia mamaky momba ny fitsarana teo anoloana seza seza fotsy lehibe, miaraka amin'i Jesosy mitsara ny "sisa amin'ny maty". Mety ve ireo mpampianatra malaza teo amin'ny Isiraely ireo, "voalohany" an'ny fiarahamoniny tamin'izany fotoana izany, i Jesosy, izay nohomboany tamin'ny farany, dia afaka mahita hoe iza izy? Ity dia "sign" tsara lavitra kokoa izany!
Etsy an-danin’izany, dia voailika tsy ho anisan’ny fanjakana mihitsy izy ireo. Hitany ny olona avy any atsinanana sy andrefana izay nojereny. Ny olona izay tsy nanana tombontsoa velively tamin’ny fahafantarana ny Soratra Masina dia mipetraka eo amin’ny latabatra amin’ny fanasana lehibe ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra (Lioka 1.3,29). Inona no mety hahamenatra kokoa?
Misy ilay "sahan'ny taolana maty" malaza ao amin'ny Ezekiela 37. Andriamanitra dia manome fahitana mampivarahontsana ny mpaminany. Ny taolana maina dia miangona miaraka amin'ny "tabataban'ady" ary tonga olona. Nilaza tamin'ilay mpaminany Andriamanitra fa ireo taolana ireo dia ny mpianakavin'i Isiraely (anisan'izany ny Fariseo).
Hoy izy ireo: “Ry zanak’olona, ​​ireto taolana ireto dia ny taranak’Israely rehetra. Indro, izao no lazainy: Maina ny taolanay, ary very ny fanantenanay, ary tapitra izahay » (Ezekiela 3.7,11). Hoy anefa Andriamanitra: “Indro, hanokatra ny fasanareo Aho, ka hitondra anareo, ry oloko, avy ao am-pasanareo, ka hitondra anareo ho any amin’ny tanin’ny Isiraely. Ary ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, rehefa manokatra ny fasanareo Aho ka mamoaka anareo, ry oloko, avy ao am-pasanareo. Ary tiako ny hanome ny aiko ao anatinareo, mba ho velona indray ianareo, ary mba honina ao amin’ny taninareo Aho, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah » (Ezekiela 3.7,12- iray).
Fa maninona no ametrahan'Andriamanitra olona voalohany izay voalohany ary nahoana no farany no voalohany? Fantatsika fa tia ny olona rehetra Andriamanitra - ny voalohany, toa ny farany sy ny olona rehetra eo aminy. Iriny ny hifandraisantsika rehetra. Ny fanomezana fibebahana lehibe sarobidy dia tsy azo omena amin'ireo izay manaiky ny fahasoavana mahafinaritra sy ny sitrapony tonga lafatra.
nataon'i Hilary Jacobs